Lahatsoratra nataon'i Fayez Mohamood momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Fayez Mohamood
Fayez Mohamood dia mpiara-miombon'antoka ary CEO an'ny Bluecore, ahafahan'ny mpivarotra eCommerce mamorona sy mizara mailaka natokana ho azy manokana miaraka amin'ny hafainganam-pandeha sy tsy mazava azo natao teo aloha, manoloana ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny fanovana katalaogaly segondra. Miaraka amin'ny mpiara-miasa maherin'ny 70 izay misolo tena ny mpanjifa mihoatra ny 100 marika. Bluecore dia iray amin'ireo fanombohana haingana indrindra ao New York City, vao tsy ela izay nanidy ny fihodinana Series A notarihin'i FirstMark Capital.
Alarobia, Jolay 29, 2015 Alarobia, Jolay 29, 2015 Fayez Mohamood
Ny mailaka voatondrona dia fomba iray lehibe hampiasana ny mpanjifa sy handroaka ny varotra, saingy ny hevi-diso momba ny antony mitarika sy ny fomba fampiharana azy ireo dia mitazona ny mpivarotra sasany tsy hanararaotra ny tetika. Inona no atao hoe mailaka iray namboarina? Amin'ny ambaratonga ifotony indrindra dia ny valin-kafatra dia valiny mandeha ho azy, toy ny fiarahabana tratry ny andro nahaterahana avy amin'i Google. Izany dia mitarika ny sasany hino fa ny mailaka nateraka dia azo ampiasaina amin'ny fotoana voafetra ihany. Fa raha ny marina, ny